Miantso ny fametraham-pialàn’ny minisitry ny fitsarana vaovao ry zareo Tseky tao anatin’ny fanamby nasionaly ho an’ny Praiminisitra Andrej Babiš · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jona 2019 5:30 GMT
Ny famoriam-bahoaka tamin'ny 21 Mey teo amin'ny kianja Wenceslas tany Prague. Saripikan'i Lucie Šarkadyová, nahazoana alalana.
Olona an'arivony no nivory tany amin'ny tanàna sy tanàndehibe maherin'ny 220 tany amin'ny Repoblika Tseky tamin'ny Talata 28 Mey, nanohitra ny fanendrena nampiady hevitra ny minisitry ny fitsarana vaovao avy amin'ny Praiministra Andrej Babiš.
Notendrena i Marie Benešová fotoana fohy taorian'ny niampangan'ny polisy an'i Babiš tany amin'ny biraon'ny mpampanoa lalàna ho nanao hosoka noho ny filazana azy ho nampiasa ny fanampiana ara-bola avy amin'ny Vondrona Eoropeana hananganana hotely mihaja lehibe iray. Mpanolo-tsaina ny filoha Miloš Zeman teo aloha, izay mpiara-dia amin'i Babiš i Benešová. Fantatra any an-toerana amin'ny anarana hoe Akanim-boropotsy ny raharaha.
Fahadimy tamin'ireo andianà fihetsiketsehana nanomboka tamin'ny fanendrena an'i Benešová ny famoriam-bahoaka tamin'ny Talata, ary nahitana ireo tanàna maro tany ambanivohitra maro ankoatra an'i Prague ny voalohany indrindra. Nomanina ny 4 Jona tao Prague ny fihetsiketsana iray hafa. Ny Fikambanana Fotoana An-tapitrisany ho an'ny Demaokrasia no hery lehibe mitarika ny hetsi-panoherana.
Miliaridera amin'ny fandraharahana ara-pambolena i Babiš ary voafidy indray tamin'ny taona 2017, fotoana fohy taorian'ilay nipoahan'ny fisavorovoroana momba ny raharaha fanodikodinam-bola. Nandà ny fanamelohana azy izy ary nilaza ny fihetsiketsehana ho ao anatin'ny fanentanana ara-politika hanoherana azy. Nanoro hevitra ireo mpanao fihetsiketsehana izy hanangana antoko politika azy ireo manokana raha te-hanohitra ny fitondrany.
Nandritra ny fotoana naha-mpanolon-tsaina tao amin'ny fitsarana azy, dia voalaza i Benešová fa nanomana antontan-taratasy tsiambaratelo momba ny rafi-pitsarana ankehitriny izay nanohanany ny filazan'i Babiš momba ny raharaha fanodikodinam-bola. Nolavin'ny Praiminisitra Babiš ny fisian'ilay antontan-taratasy.
Nilaza i Benešová fa nikasa ny hametraka ny fanavaozana ara-pitsarana izay hametra ny fe-potoam-piasan'ny mpampanoa lalàna ankoatra ny fanovana hafa amin'ny rafitra fanenjehana araka ny lalàna izy. Manahy ireo mpanao hetsi-panoherana fa tetika hanalana ny Mpampanoa Lalàna Jeneraly Pavel Zeman miaraka amin'ny Lehiben'ny biraon'ny mpampanoa lalàna ao Prague Lenka Bradáčová, izay samy miandraikitra ny raharaha mifandraika amin'ny Akanim-borompotsy izany.
Fifanakalozan-kevitra tato amin'ny aterineto
Mafana ny resadresaka tamin'ny aterineto mikasika io lohahevitra io, ary matetika niaraka tamin'ny fiantsoana anarana avy amin'ny andaniny roa. Niantso ny mpanao fihetsiketsehana ho “sluníčkář” ny mpanohana ny governemanta, izay midika ara-bakiteny hoe “olona mamiratra” amin'ny teny Tseky ary midika fa olona tsontsa izy ireo manandratra hevitra tsy mifanaraka amin'ny zavamisy. Matetika aza ny mpanao fihetsiketsehana no lazaina fa “Prague Café”, na “avy any amin'ny fivarotana kafe ao Prague”, izay midika fa manampahaizana izy ireo kanefa tsy mifandray amin'ny tena fiainana, miaraka amin'ny asa mora amin'ny sehatry ny kolontsaina, ny fampitam-baovao, na ny fikambanana tsy mitady tombontsoa izay ahazoany vola betsaka satria tsy manao na inona na inona izy ireo.
Mandritra izany fotoana izany, nilaza ny mpanao fihetsiketsehana fa “mpihinana mofo endasina” ny mpanohana ny Praiminisitra, izay milaza ny zava-misy fa mizara mofo endasina i Babiš amin'ny fampielezan-keviny amin'ny fifidianana. Ilazana izany fa olona mahonena ho takalon'ny tsolotra kely toy ny tsakitsaky ny mpanohana an'i Babiš.
Nilaza ny mpisera iray fa marina ny ataon'ny Praiminisitra amin'ny tsy firaharahiana ny fihetsiketsehana:
Tsy ilaina intsony ny fifidianana raha ilaina ny mihetsika mba hanomezana rariny fotsiny ny mpanao fihetsiketsehana izay tsy afa-po. Mikasika an'i Babiš sy Benešová izany androany, ary hanafoana ny antoko politika manelingelina, ny fitsarana, ny vahoaka, sns ireo mpanao fihetsiketsehana raha hitranga avokoa izany rehetra izany. Ho loza izany!
Mpisera iray hafa no nankasitraka ny valintenin'ny Praiminisitra tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana:
Babiše nemusí nikdo obdivovat, ale vzkaz desetitisícům demostrantů, že si mají založit vlastní stranu a jít s kůží na trh…to je pro ty sluníčkové šmejdy dost silná káva. 😅
Tsy voatery hankasitraka an'i Babiš ianareo, fa saingy mampalasa adala ireo fakofakon'ny “vahoaka mamiratra” ireo ny hafatra ho an'ireo mpanao fihetsiketsehana an'arivony fa hoe tokony hanangana ny antoko politikany manokana sy hirotsaka an-tsehatra amin'izany izy ireo.
Nilaza ny mpisera Twitter iray hafa fa tsy misy ilan'ny fiarahamonina azy ny asan'ny mpanao fihetsiketsehana ary izany no antony hisafidianan'izy ireo hanao hetsi-panoherana fa tsy fitokonana.
Mila manao fihetsiketsehana ny Prague Café satria raha mitokona izy ireo, inona no hitranga …?
Any amin'ny ankilany mifanohitra amin'izany, nilaza ny mpisera Twitter iray fa manao an-dolompo ireo mpomba an'i Babiš :
Araka ny hevitro, tsy fantatry ny mpifidy ny ANO ny antony hifidianany an'i Babiš, ary tsy miraharaha ny zava-dratsy rehetra ataony izy ireo. Eny tokoa, nahavita nanasaraka ny fiarahamonina Tseky i Zeman sy i Babiš mba hanaovan'ny olona nifidy ny ANO fotsiny haratsiam-panahy amin'ny “Prague café izay tsy miasa ary te-hamotika ny firenentsika”.
Nanantitrantitra ny zava-misy ny olom-pirenena iray fa manana ny gazety be mpamaky betsaka indrindra ao amin'ny Repoblika Tseky i Babiš ary miampanga azy ho nanararaotra izany mba hampiroboroboana ny tenany:
Raha toa ka milaza indray ny fampitambaovaon'i Babiš, fa olona vitsy monja no tonga tany amin'ny kianja Wenceslas dia tsy marina izany. Feno hatrany amin'ny lalan'ny tramway izany ary feno ihany koa ny arabe mifanila aminy. Raha toa i Zeman sy ireo namany milaza fa manao fihetsiketsehana ny Prague Café dia tsy marina izany. Feno mpanao fihetsiketsehana ny fiantsonana sy ny fiaran-dalamby.
Fotoana fohy talohan'ny fifidianana Parlemanteran'ny Vondrona Eoropeana tamin'ny 23-26 Mey, nilaza ny mpisera iray hafa fa nahatsikaritra fizarana mofo endasina nataon'ny antoko politikan'i Babiš ANO izy ireo:
2 andro taorian'ny iray tamin'ireo fihetsiketsehana goavana indrindra manohitra an'i Babiš dia nisy tranoeva nahitana dokambarotra ho an'ny ANO tao amin'ny fiantsonan'ny metro I.P. Pavlova nizarana mofo endasina. Ary naka izany ireo olona! Ary lasa ny fotoana …
Nahazo ny seza miisa enina tamin'ireo seza miisa 21 natokana ho an'ny Repoblika Tseky ao amin'ny Parlemanta Eraopeana ny ANO na dia teo aza ny hetsi-panoherana manohitra ny governemanta- izany hoe niampy seza roa raha oharina tamin'ny fifidianana teo aloha tamin'ny taona 2014.